११ वर्षीया बालिकाले बच्चा जन्माएपछि ! « Mero LifeStyle
११ वर्षीया बालिकाले बच्चा जन्माएपछि !
मेरो लाइफस्टाइल	|| 1 July, 2021
अहिले बेलायतको एउटा समाचार अत्याधिक भाइरल बनिरहेको छ । त्यहाँ एक ११ वर्षीया बालिकाले बच्चा जन्माएकी छन् । यससँगै उनी बेलायतमा सबैभन्दा कम उमेरमा आमा बनेकी छन् ।
यो समाचार सुनेर विश्वभरका मानिसहरु अचम्मित भएका छन् । यी बालिका १० वर्षको उमेरमा गर्भवती भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । करिव ३० हप्ता गर्भधारण गरेपछि उनले बच्चा जन्माएकी हुन् । अहिले आमा र बच्चा दुवै जना पूर्णरुपमा स्वस्थ छन् । जब यो कुरा बालिकाका आमाबुबालाई थाहा भयो, तब उनीहरुले यसको विश्वासै गर्न सकेनन् ।
डाक्टरले यो खबरको पुष्टि गरेपछि उनीहरु अचम्मित भएका थिए । यो घटनाको बारेमा डाक्टर क्यारल कूपरले यो उमेरमा आमा बन्दा गर्भ भित्रको बच्चाको तौल बोक्ने कुरामा असर गर्दछ । साथै शरीर भित्र हर्मोन्समा नकारात्मक असर पर्दछ । यसले यौवनको अवस्थालाई पनि चाँडै ल्याउँछ । वर्ष २००६ मा भी टेरेसा मिडल्टन नामक १२ वर्षीया बालिका आमा बनेकी थिइन् ।
त्यसपछि २०१४ मा एक १२ वर्षीया बालिकाले बच्चा जन्माएकी थिइन् । यी दुवै घटना बेलायतका हुन् । सबैभन्दा कम उमेरमा आमा बनेको रेकर्ड पेरुकी एक बालिका लीना मदीनाको नाममा छ । उनी ५ वर्षको उमेरमा आमा बनेकी थिइन् ।
सुप बनाउन काटेर टुक्रा बनाइएको कोब्राले डसेपछि सेफको मृत्यु
जीवित सर्पले डसेर मानिस को मृत्यु भएको घटना त नेपालमा थुप्रै छन् । तर, मृत सर्पले टोकेर मृत्यु भएको घटना
यी देशमा यस्ता छन् सेक्स सम्बन्धि अनौठा नियम
यौनका विषयमा विश्वका हरेक देशहरुको आ–आफ्नै मान्यता, धारणा, परम्परा तथा कानून छन् । कुनै देश यौनका विषयमा निकै खुला छन्
आखिर फ्लाइट स्टाफमा धेरैजसो महिला नै किन हुन्छन् ?
के तपाईले हवाइजहाजमा यात्रा गर्नुभएको छ ? यदि छैन भने फिल्म वा ब्लगमा कसैले यात्रा गरेको देख्नुभएकै होला । यसमा
गाईले नब्याउँदै दूध दिन थालेपछि…
पोखरा महानगरपालिका—२१ फेदीपाटनका मुक्ति पौडेल कात्तिकको अन्तिममा ब्याउनुपर्ने गाईले छ महिनाअघि नब्याउँदै दूध दिन थालेपछि दङ्ग छन् । विसं २०७७